Raysalwasaaraha Israel oo diidey in Ilhan Cumar iyo Rashida Tlaib booqdaan Israel • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Raysalwasaaraha Israel oo diidey in Ilhan Cumar iyo Rashida Tlaib booqdaan Israel
Raysalwasaaraha Israel oo diidey in Ilhan Cumar iyo Rashida Tlaib booqdaan Israel
August 15, 2019 - By: Khalid Yusuf
Xukuumadda uu Raysalwasaaraha ka yahay Benjamin Netanyahu ayaa xanibaad ku soo rogety safar qorsheysanaa oo labada haweenka ah ee Muslimka ah kuna jira aqalka Kongereska Maraykanka ay ku tegi lahaayeen dhulka Israel xoogga ku haysato ee Falastiin.
Ku xigeenka Wasiirka arrimaha dibadda ee Israel Tzipi Hotovely ayaa sheegtey in ay labaaas Xildhibaan ee ka tirsan dalka ay xulafada yhiin aysan booqan karin dhulkooda sida ay tiri.
Ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa go’aankan wada-tashi kala yeeshay xubno ka mid ah golihiisa wasiirada, arbacadii, ka hor inta aan maanta lagu dhowaaqin.
Rashida Tlaib ayaa asal ahaan ka soo jeeda dhulka xoogga lagu haysto ee Falastiin waxaana laga soo doortey gobolka Michigan, Ilhan Cumar ayaa iyaduna asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya waxaana laga soo doortaa gobolka Minnesota, labadan gabdhood ayaa kamid ah kuwo ay si weyn ksu hayaan Madaxweynaha Maraykanka iyo weliba siyaasiyiinta iyo warbaahinta xagjirka ah.
Go’aanka xukuumadda xagjirka ah ee Israil ayaa la aaminsan yahay in uu saameyn ku yeeshay Madaxweynaha Maraykanka oo bartiisa twitterka qoraal uu dhigey ku tilmaamey haddii labadaas Xildhibaan loo oggolaado in ay tagaan Qudus in ay tahay daciifnimo.
Ilhan Cumar oo warbixin ka soo saartey goaanka Natanyahuka bixisay s ayaa sheegtey in uu yahay mid ihaano ku ah xukuumadda Benjamin Netanyahu.
Labada haweenka ah ee xanibaada lagu soo rogey ayaa ka tirsan dhaq-dhaqaaqa Horu-socodka Progressive ee Xisbiga Dimoqraadiga, waxaana ay dhaliilaan siyaasadda qalafsan ee Israel. Waxaa la is weydiinayaa tallaabada Xisbiga Dimoqraadigu qaadi doono maadaama labada dal Xulufo ay yihiin horeyna aysan u dhici jirin in xanibaad caynkan oo kale ah la isku soo rogo. Xisbiga Dimoqraadiga ayaa hadda haysta aqlabiyadda aqalka Kongeresska, waxaana ku badan Xildhibaanada horu-socodka ah.